.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Effect များ ၄
Flash Effect များ ၄
ဖလက်ဖိုင်လေးတွေထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သစ်ရွက်ဖလက်လေးတွေပါ။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်လေးကနေ သွား ဒေါင်းယူလိုက်နော်။
Download>>> Leave Effects
ကြည့်မယ်ဆိုရင် Flash ဖိုင် နံပါတ် ပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး Open Link in New Tab ကို နှိပ်ပါ။
ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့Flash ဖိုင် နံပါတ် ပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး
Save Link As... ကို နှိပ်လိုက်ပါရန်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ..
Posted by FlashSongCrazy at 22:16